Songadina Global Voices tamin’iny taona 2021 iny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2022 4:26 GMT
Tamin'ny 2021, nivory nanomboka ny 11 novambra ka hatramin’ny 11 desambra lasa teo ny Filankevitry ny vondrom-piarahamonina ato amin’ny Global Voices. Global Voices @ 20 no lohahevitra amin’ity taona ity. Valo amby fitopolo izahay no nivory sy niresaka momba ny tanjon'ny Global Voices sy ny fanambarana ny asa atao ho fiomanana amin'ny paikady hitondrana antsika amin'ny faha-20 taonantsika, amin'ny 2024.
Nandritra ny Filankevitra, nanomana ny fampahafantarana mikasika ny “Famintinana Global Voices 2021” izahay. Mirakitra ny fahombiazantsika sy ny fanamby atrehantsika amin'ny hetsika ataontsika, ny toe-bolantsika sy ny fomba fandaminana ny fahasalamana ity tatitra ity. Tafiditra ao anatin'izany ny fampahalalam-baovao hatramin'ny telo volana voalohany tamin'ny 2021.
Faly aho mitatitra fa iray amin'ireo taona tsara indrindra ho antsika ny taona 2021, na teo amin'ny tetikasa na teo amin’ny famoahana lahatsoratra, ary tamin'ny lafiny fandaminana momba ny fahasalamana. Nanomboka tetikasa vaovao isankarazany isika, nanomboka tamin'ny fikarohana vaovao sy ny hetsika ho anaty tambajotra tao amin’ny Rising Voices, hatrany amin’ny ekipa nampitomboana tao amin’ny Advox, sy ny fampitomboana fikarohanay tamin’ny Civic Media Observatory.
Navitrika sy nifantoka ny Filankevitra 2021 ary tena nanampy antsika hahatakatra ny fomba fijerin'ny vondrom-piarahamonina momba ny asa ataontsika sy ny fiantraikany eo amin'izao tontolo izao. Handray ny asa ataontsika ho teboka fanombohana hananganana paikady vaovao ho an'ny roa na telo taona manaraka ny Filankevitsika 2022.
Manasa ny vondrom-piarahamonina mpikambana rehetra ato amin'ny Global Voices izay mahafeno ny fepetra handraisana anjara amin'ny Filankevitra izahay, ary manantena ny hevitra avy aminareo!